राजनीतिक संकट भैरहदा किन दिल्ली उडे झलनाथ खनाल ? – News Nepali Dainik
राजनीतिक संकट भैरहदा किन दिल्ली उडे झलनाथ खनाल ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०१, २०७७ समय: ८:५८:५२
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका छन् । खनाल स्वास्थ्योपचारका लागि दिल्ली पुगेको उनका स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनी चार दिन दिल्लीमा रहनेछन् ।
खनालको स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले नियमित चेकजाँच गर्दै आएका छन् । नेपालमा राजनीतिक संकट बढिरहँदा नेताहरुको भारत दौडाहा बढिरहेको छ । यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएका थिए । उनी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भन्दै मुम्बई पुगेका थिए ।
भारतमा रहँदा उनले केही राजनीतिक भेटघाट पनि गर्ने बुझिएको छ । उनले पुराना राजनीतिक मित्रहरुसँग भेट्ने बुझिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै दिल्ली पुगेका छन् ।
Last Updated on: February 13th, 2021 at 8:58 am
७६३ पटक हेरिएको